Warning Signs Of Kidney Failure ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းလက္ခဏာလေးခု - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Warning Signs Of Kidney Failure ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းလက္ခဏာလေးခု
အမေရိကမှာ လူပေါင်း ၆ သောင်း ၆ ထောင်ကျော် ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း အဆင့်ရောက်နေ ကြတယ် ။ အသက် ၆ဝ ကျော်တွေမှာ များတယ်။ ငယ်သူတွေလည်း မလွတ်ကြပါ။ ကျောက်ကပ်ဆိုတာ ကိုယ်ထဲက စွန့်ထုတ်ပစ္စည်းတွေကို စစ်ထုတ်ပေးနေတယ်။ အဲတာတွေ ထုတ်မပေးနိုင်ရင် အတွင်းထဲ အဆိပ်သင့်သလိုဖြစ်တယ်။ ကျောက်ကပ် အလုပ်တွေထဲမှာ အက်စစ်ဓါတ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်နေအောင် ထိန်းပေးနေတယ်။ အဲဒီစနစ်နဲ့ အပူချိန်ထိန်းတာပါပျက်မယ်။ အရည် + ဓါတ်ဆားတွေကိုလည်း ထိန်းပေးနေတယ်။ ပျက်မယ်။
၁။ Varying Shades Of Urine ဆီးအရောင်
ကျောက်ကပ်အလုပ်ပျက်တာနဲ့ ဆီးအရောင်ပြောင်းမယ်။ အဝါရောင်နုနုကနေ နီညိုညိုအထိရှိမယ်။ ခပ်စိမ်းစိန်းနဲ့ သွေးရောင်လည်းရှိတယ်။
၂။ Mild-Severe Lower-back Ache ခါးအလယ်ပိုင်းနာခြင်း
နောက်ကျောလယ်လောက်ကနာရင် ကျောက်ကပ်မှာ တခုခုဖြစ်နေသလား စစ်ဆေးရမယ်။ ဆီးသွားလို့နာတာနဲ့ တွဲနေသလား။
၃။ Swelling-up Of Body Parts ကိုယ်ရောင်သလား
မျက်နှာ၊ ခြေ၊ လက်တွေရောင်သလား။
၄။ Frequent Skin Problems အရေပြားနာ မကြာခဏဖြစ်သလား
အရေပြားမှာ အနီရောင်၊ အနာ၊ ပိုးဝင်တာ၊ ယားတာတွေမကြာခဏဖြစ်ရင် ကျောက်ကပ်ကိုစစ်ဆေးသင့်တယ်။
1. Acidic Urine ဆီး အက်စစ်ဓါတ်များနေခြင်း
2. Acute glomerulonephritis ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း
3. Bladder Cancer ဆီးအိမ်-ကင်ဆာ
4. BPH ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း
5. Dialysis ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း
6. Drugs and Kidneys ကျောက်ကပ်အပေါ် သက်ရောက်စေတဲ့ ဆေးတွေ
7. Frequent urination ဆီးသွားတဲ့အကြိမ်များစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/…/12/frequent-urination.h…
8. Glomerulonephritis ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းတမျိုး
9. Hematuria causes ဆီးထဲသွေးပါခြင်း အကြောင်းရင်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/…/12/hematuria-causes.html
10. Honeymoon Cystitis ဟန်းနီးမွန်းမှာ ဆီးအောင့်တာ
11. IgA nephropathy အိုင်ဂျီအေ ကျောက်ကပ်ရောဂါ
12. Kidney cysts ကျောက်ကပ်ရေအိတ်
13. Kidney Diseases in Children ကလေး ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေ
14. Kidney Stones Home Remedies ကျောက်တည်တာသက်သာအောင် အိမ်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲ
15. Kidney stones ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်ခြင်း၊
16. Kidney transplant ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှု
17. Kidneys ကျောက်ကပ်ကို ကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ခြင်း
18. Medicine for Diseases of Urinary Tract ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါဆေးများ
19. Microalbuminuria ဆီးထဲအယ်လ်ဗျူမင်များနေခြင်း
20. Nephritis ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း
21. Polycystic Kidney Disease ကျောက်ကပ်ရောဂါ
22. Renal Cortical Cyst ကျောက်ကပ် အပြင်မှာရှိနေတဲ့ အိတ်
23. Renal Dialysis ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း
24. Semen in Urine ဆီးထဲသုက်ပါခြင်း
25. Urinary tract infections (UTI) ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊
26. Urine Dribbling အမျိုးသား ဆီးတစက်တစက် ထွက်နေခြင်း
27. Urine output at different ages ကလေးတွေ ဆီးဘယ်လောက်သွားသလည်း
28. Urine smell ဆီးနံ့
29. World Kidney Day ကမ္ဘာ့ကျောက်ကပ်နေ့